Banyere Anyị - Ceres Plastic Technology Co., Ltd.
Ceres Plastic Technology Co., Ltd. (CPT) bụ ụlọ ọrụ na -arụkọ ọrụ ọnụ nke Ceres plastic Canada na Shandong Huaxin Plastics Group nke bụ onye na -eduga n'ahịa ahịa ihe nkiri na ọrụ ugbo nke China kemgbe 1996. Otu, ụlọ ọrụ nwere oke ngwaahịa, ewepụtala ụdị dị iche iche. ngwaahịa plastik, gụnyere ihe nkiri plastik, masterbatch, PE & PVC pipe, profaịlụ aluminom wdg.
CPT etinyela aka na azụmaahịa na azụmaahịa ihe nkiri ihe karịrị afọ 20. Site na ndị otu nnwale nke R&D, anyị na-anọgide na-enye ihe nkiri polyolefin emepụtara ọhụrụ na ịkwa akwa maka ime mgbanwe maka mkpa dị iche iche yana ọnọdụ ihu igwe dị iche iche nye ndị ahịa ụwa.
CPT na -akwado ụkpụrụ nkwado mgbe anyị na ụwa na -ekwurịta okwu. Anyị na -arụ ọrụ na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe yana ebumnuche nchedo gburugburu ebe obibi site na ịmegharị na -aga n'ihu na imepụta ihe ọhụrụ iji duzie ngwaahịa na usoro azụmaahịa anyị.
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Ngwaahịa niile